I-600 Pound £
Iimbonakalo: Uyilo lwale mihla, igumbi lendlu ye Studio, umgangatho weLaminate, ulungiso lwesitayile esiphetheyo, Ikhitshi enezinye izixhobo, igumbi lokubonisa, kufutshane neYunivesithi iEssex, irhafu yebhunga - ibhendi bendi, indawo yokupakisha ekhoyo
Isishwankathelo sendlu yangoku kunye neboniswe ngokufanelekileyo kwigumbi lokuhlala elimi kumgama wokuhamba wombindi wedolophu kunye neDyunivesithi yase-Essex. Ipropathi iya kwenza isiseko esifanelekileyo sabafundi okanye soqeqesho olunye.Ukubhalwa kwesitayile se studio sokwangoku nesiboniswe kakuhle esikumgama wokuhamba wombindi wedolophu kunye neDyunivesithi yase-Essex. Iipropathi ziya kwenza isiseko esifanelekileyo sabafundi okanye iitekhnoloji ezizodwa.Ukufumana isibonelelo esivulekileyo sendawo yokuhlala kwikhitshi elinamhlanje elinempahla ethile kunye negumbi lokuhlambela labucala elinokwangoku. Ipropathi igqityiwe ukuya kumgangatho ophezulu ngokuhonjiswa ngokungathathi hlangothi, umgangatho wamanqatha kunye nokubekwa okuphezulu kunye nokufakelwa. Ngaphandle kukho indawo enkulu yokupaka.Ipropathi inikezelwa ngaphandle kokuchazwa kwaye iyafumaneka indawo yokuhlala ukuya esiphelweni sika-Matshi .Ngoko yonke imigudu efanelekileyo yenziwa ukuqinisekisa ukuchaneka kwenkcazo kunye nomxholo, kufuneka sikwazise ngokulandelayo isikhokelo okanye ukusikelwa umda. (1) Imigaqo yokuhambisa imali-umntu oza kuba ngumqeshi uya kucelwa ukuba avelise amaxwebhu achongiweyo ngexesha lenkqubo yokwenziwa kwengxelo kwaye siya kucela intsebenziswano yenu ukuze kungabikho kulibaziseka ekuvumeni ilungelo lokuhlala. (2) Ezi nkcukacha aziyonxalenye yazo zonke izithembiso okanye isivumelwano. (3) Isicatshulwa, iifoto kunye nezicwangciso zezikhokelo kuphela kwaye aziyomfuneko ngokupheleleyo. (4) Imilinganiselo: Obu bukhulu begumbi eliqikelelweyo bucwangciswa kuphela njengesikhokelo ngokubanzi. Kuya kufuneka uqinisekise ngobungakanani bayo ukuze wanelise ukuchaneka kwazo. . (5) Phambi kokuba ungene kulo naliphi na ilungelo lokuqesha kwisakhiwo esinye sezinto ezipapashiweyo, imeko nemixholo yepropathi iya kuhlala ichazwe kwisivumelwano sokuhlala kunye nohlu lweempahla. Nceda uqiniseke ukuba ufunda ngononophelo kwaye uyavumelana nesivumelwano sokuhlala kunye nayiphi na i-inventri enikezwe ngaphambi kokutyikitya la maxwebhu.